कमर्सियल बैंक छोडेर किन बिकास बैंक रोज्दैछन् बैंकरहरु ? बैंकरकै कटाक्ष, 'धनी नामर्द ठिक कि ठिक्कको मर्द ?'
ARCHIVE, BANKING, MUDRA MAMILA » कमर्सियल बैंक छोडेर किन बिकास बैंक रोज्दैछन् बैंकरहरु ? बैंकरकै कटाक्ष, 'धनी नामर्द ठिक कि ठिक्कको मर्द ?'
काठमाडौँ - प्रभु बैंकमा डेपुटी सीइओ भएर काम गरेका ताराप्रसाद मानन्धर मुक्तिनाथ विकास बैंकमा डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर छिरे । १८ बर्षको बैंकिङ अनुभव भएका उनले नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसिसी बैंक हुँदै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा समेत काम गरेका छन् । तर कमर्सियल बैंकमा यति लामो अनुभव भएका उनी किन बिकास बैंक छिरे ?
यसो त बैंकर वाणिज्य बैंक छाडेर बिकास बैंक जाने गरेको घटना यो पहिलो भने होइन । र वाणिज्य बैंक छाडेर बिकास बैंकमा आउन खोज्नेहरुको लर्को पनि लामो नै छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट मेगामा डेपुटी सीइओ भएर गएका एक बैंकर निकट भविष्यमा नै एक बिकास बैंकमा सीइओ भएर जाँदैछन् । त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंकका उपल्लो तहका एक बैंकरपनि बिकास बैंक तिर जाने तयारीमा छन् । उनेल २ बिकास बैंकसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । सिभिल बैंकमा राम्रै दर्जामा काम गरेका एक बैंकरपनि बिकास बैंक हानिने तयारीमा छन् ।आखिर किन बैंकरको रोजाईमा पर्दैछ बिकास बैंक ? सुन्दा सामान्य लाग्ने तर एउटा गहन बहस हुन सक्छ यो ।
थरी-थरीका पीडा, फरक-फरक प्रतिक्रिया !
कमर्सियल बैंक छाडेर भकाभक बिकास बैंकतिर किन जाँदैछन् बैंकरहरु ? हामीले यहि प्रश्न कमर्सियल बैंक छाडेर बिकास बैंक गएकाहरु र जाने तयारीमा रहेकाहरुलाई सोधेका थियौं । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै विभिन्न बैंकरहरुले वाणिज्य बैंकको स्थिति सोचेको जस्तो नभएको र केहि बिकास बैंकको स्थिति केहि वाणिज्य बैंकहरुभन्दा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
'कुन बैंक रोज्ने भन्ने आफ्नो कुरा हो । जहाँ कम्फर्ट हुन्छ, त्यहीं जाने हो । कुनै बिकास बैंक छोड्नु भनेको काम गरिरहेको वाणिज्य बैंक नराम्रो भएर भन्ने पनि होइन ।' छिट्टै नै एक विकास बैंकमा जाने तयारीमा रहेका सिभिल बैंकमा कार्यरत एक बैंकर भन्छन्, 'सबैको आ-आफ्नै चोइस हो । कि यसमा पनि कुलिङ लगाउनुपर्यो ! (लामो हाँसो) यस्तै बिकास बैंकमै कार्यरत एक बैंकरले यस विषयमा अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ' ठुलो भनेर के गर्नु ? कतिपय बैंकमा वर्किंग कल्चर नै हुँदैन । प्रेसर बढी आउँछ । जागिरका लागि घर, परिवार, नै छोडेर त कसले किन जागिर खाने र ? आफुलाई जहाँ सजिलो हुन्छ तहिं काम गर्ने हो। '
पैसा र पद पनि फ्याक्टर, कतिपय बिकास बैंक वाणिज्यभन्दा अब्बल !
यसो त पैसा र पद पनि जागिर छोड्ने 'फ्याक्टर' बन्ने गरेको कतिपय बैंकरहरुको भनाइ छ । 'पैसा बढ्छ भने, वा पद बढ्छ भने वा पद उही रहेर काम थोरै हुन्छ, वा रिस्क कम हुन्छ भने बिकास बैंकमा के खराबी छ र ?' केहि समयमा नै एक विकास बैंक हानिन लागेका एक बैंकर भन्छन्, 'आफ्नो काम देखाउने हो, जता गए पनि हुन्छ ।' यता केहि बैंकरहरुको प्रतिक्रिया भने फरक छ । उनीहरुका अनुसार नेपालमा कतिपय बिकास बैंक केहि वाणिज्य बैंकभन्दा निकै राम्रा छन् । 'मालिककि बुढी, ड्राइभरसँग किन पोइल जान्छन् त ? धनी नामर्द बुढो भन्दा ठिक्कको मर्द बुढो नै ठिक होइन र ?' एक बैंकरले निकै रमाइलो पारामा अर्थ सरोकारसँग भने, 'बैंक ठुलो भएर हुँदैन, सबैकुराले काम गर्न सकिने ठाउँ हुनुपर्यो । केहि वाणिज्य बैंकहरु नामर्द धनी बुढाजस्ता छन् भने केहि बिकास बैंकहरु ठिक्क तर मर्द बुढाजस्तो छन् । अव रोज्ने कुन तपाईंको इक्षा ।'
यता वाणिज्य बैंकबाट बिकास बैंकमा गएकाहरु जोखिम पनि कम हुने, र काममा पनि आनन्द हुने बताउँछन् । 'मेन कुरा प्रेसर हो । वाणिज्य बैंकहरुमा अत्याधिक प्रेसर हुन्छ । बिकास बैंकमा त्यस्तो नहुने होइन । तर बिकास बैंकमा वाणिज्य बैंकको तुलनामा प्रेसर कम हुन्छ ।' वाणिज्य बैंक छाडेर बिकास बैंकमा हानिएका एक बैंकर भन्छन्, 'ग्रोथ हुने ठाउँपनि धेरै हुन्छ ।'